Business Directory (554)
Free Business Listing (497)
International Business Listings (163)
Website Submission (203)
Car Broker (6)
Car Seller (204)
Education Services (63)
Overseas Education (6)
Training & Classes (56)
Fashion and Lifestyle (296)
Beauty & Spa (15)
Video and Music (14)
Hotels and Tourism (26)
Myanmar Places (12)
Tour Guide (11)
Employer Job Offer (101)
Employment Agency (37)
Job Seeker Post (5)
Property Agents (40)
Property for Rent (25)
Property for Sale (88)
Business Services (164)
Other Services (160)
Stuff for Sale (706)
Other Stuffs to Sell (363)
Phone Handsets (278)
Home » News » အိုကလာဟိုးမားက ရေကန်ကြီးအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွား
Comments Off on အိုကလာဟိုးမားက ရေကန်ကြီးအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွား
admin | News | March 25, 2014
St.Patrick’s Day မှာအိုကလာဟိုးမား ကရေကန်ကြီးအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွား
မတ်လ ၁၇ ရက်နေ. မနက် ၅နာရီလောက်မှာ အိုကလာဟိုးမားမြို.ရုက္ခဗေဒပန်းခြံ ရေကန်ထဲကရေတွေ အစိမ်းရောင် ပြောင်းသွားတာကို ဝန်ထမ်းတွေကစတွေ.ခဲ.တာပါ။
အများနဲ.သက်ဆိုင်တဲ.ပန်းခြံထဲကရေကန်ကို ဒီလိုလုပ်တာ လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ သူတို.ကအရောင်ဆိုးဆေး chemical တွေခတ်သွားခဲ.တာပါ။ဒီ ရေတွေကိုပြန်ပြီးလဲလှယ်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျမှာပါ။ ဒီရေထဲကငါးလေးတွေ လိပ်လေးတွေ နဲ. ငှက်ကလေး အတွက်လည်း ဓာတုဗေဒ ဆိုးဆေးတွေက အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိူင်ပါတယ်။ ရေတွေကိုချက်ချင်းဖေါက်ထုတ်ပြီး ရေသန်.တွေနဲ.လဲပေးရမှာပါ။ အခုဒီလိုလုပ်သွားခဲ.တဲ.သူတွေကို လိုက်ရှာနေကြပါပြီ လို. Myraid ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကတာဝန်ရှိသူ Maureen Heffernan ကပြောသွားပါတယ်။
– Ref: FDL Reporter
Fun & Knowledge Knowledge world news ထူးဆန်းထွေလာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး
by admin on August 27, 2013 -0Comments
UN inspectors' convoy hit by sniper fire အမည္မသိ လက္နက္ကို္င္မ်ားက ဆီးရီးယား ၿမိဳ ့ေတာ္အတြင္း ကုလယာဥ္တန္းကိုစနိုက္ပါမ်ားျဖင့္ တိုက္ခို္က္ခဲ့တယ္လို့UN ကဆိုပ...
by kwxnmn on August 20, 2013 -0Comments
အေသးငယ္ဆံုး တယ္လီဖုန္း (Tiny Handset) ယခု တစ္ေလာ Fan page ေတြမွာ အေသးငယ္ဆံုးေသာ Mobile ဖုန္းေလး ကို Fan item တစ္ခု ေနနဲ့တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ေဖာ္ျပ ေျကာ္ျငာတာ...
Drug to Death Penalty
by admin on August 30, 2013 -0Comments
အသက္ ၆၄ နွစ္အရြယ္ စကၤာပူနိုင္ငံသား မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကူးမွု ေသဒဏ္က်ခံဖြယ္ရာရွိ အသက္ ၆၄ နွစ္အရြယ္ စကၤာပူနိုင္ငံသား လူမႈဝန္ထမ္းေဟာင္း အဒူ ဝါဟတ္ မိုဟာမက္ဟာ အင္ဒ...
by admin on April 3, 2014 -0Comments
ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အကၤ်ီေလးေတြကိုု စက်င္ေက်ာက္ (Carrera Marble) နဲ႔ ထြင္းထုုထားတာပါတဲ့…။ ထုုဆစ္ခဲ့တဲ့ပညာရွင္ကေတာ့ Edinburgh ျမိဳ႕ စေကာ့တလန္လူမ်ိုုး Alasda...
by admin on May 20, 2014 -0Comments
ဘိုထိုင်အိမ်သာ ဘာ့ကြောင့်သုံးသင့်လဲ……? မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာအခေါ် ဗမာထိုင်၊ ဆောင့်ကြောင့် (Squat Toilt) တွေအသုံးများပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က ဘိုထိုင် (Sit Toi...
mr.zawwinhtut - "ks15000/month. Sooo bad!"...
mmrblb - "9 million units x est 800$ =7billion $$$$$$$ Great Sales/ Fantastic Revenue :D :D :P"...
admin - "ကားအသစ္ တစ္စီးပဲ ဝယ္စီးလိုက္ေတာ့မယ္။ :P :D"...
nyeinminnnaung - "ok"...
nyeinminnnaung - "ILove iPhone 5s"...
Beauty and Life Style Biggest Donation Blog post Branding camera phone crime diamond Environment fart Fashion Fun & Knowledge Gadget gold Guitar Instrumental how to IQ & EQ Knowledge Marketing and Sales Medical Miss Universe 2013 Mobile Phones Moe Sat Y Music Nail Art NGO Postal Codes QR code Rock Science singapore riot Space Sympathy Technology trending news Unexpected un natural VOA world news Yangon Postal Codes ဆာငံသီးဖျော်ရည် ထူးဆန်းထွေလာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး မိုးစက်ဝိုင် ဟာသ ၂၀၁၃
All Categories Business Directory (554) Free Business Listing (497) International Business Listings (163) Website Submission (203) Cars (212) Car Broker (6) Car Buyer (1) Car Seller (204) Education Services (63) Overseas Education (6) Training & Classes (56) Tuition (23) Events (111) Announcement (107) Events (6) Exhibition (3) Fashion and Lifestyle (296) Beauty & Spa (15) Books (1) Clothings (5) Health (18) Shopping (249) Video and Music (14) Food and Beverages (9) Beverage (3) Food (5) Hotels and Tourism (26) Hotels (8) Myanmar Places (12) Tour Guide (11) Jobs (111) Employer Job Offer (101) Employment Agency (37) Job Seeker Post (5) Property (106) Property Agents (40) Property for Rent (25) Property for Sale (88) Services (261) Business Services (164) Other Services (160) Stuff for Sale (706) Antiques (2) Cameras (21) Electronics (196) Gadgets (156) Machinery (37) Other Stuffs to Sell (363) Phone Handsets (278) Wanted (527)
© 2020 Myanmar Classified Ads | မြန်မာ အခမဲ့ ကြော်ငြာ | Myanmar Advertising. All Rights Reserved.
All times are GMT 6.5. The time now is 5:15 am.